Usoro Usoro Ngwa Azụmaahịa bidoro na Mpaghara Muğla | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara AegeanLelee Nzuzo zuru ezu 48Usoro Usoro Ngwa Azụmaahịa bidoro na mpaghara Muğla
24 / 09 / 2019 Lelee Nzuzo zuru ezu 48, Mpaghara Aegean, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
Obodo Muğla mepere emepe, tinyere iwu ọhụrụ ahụ etinyere n'ọrụ, “Asambodo Ọrụ Asambodo na Asambodo Nkwanye Anya” iji hụ na ndị ọkwọ ụgbọala nke azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa nwere ike inweta akwụkwọ ha tupu ha abịa n’etiti obodo.
Obodo Muğla mepere emepe amalitela ịnata akwụkwọ nke ndị ọkwọ ụgbọala nke ndị nwere ikikere azụmaahịa azụmaahịa na mpaghara Fethiye, bụ nke kpebisiri ike dịka otu n'ime mpaghara ndị na-anya ụgbọ mmiri maka "Asambodo Ọrụ na Ruute Asambodo".
N'ihi ọdịdị obodo Muğla, Muğla Metropolitan Obodo emeela iwu ọhụrụ iji gbochie oge na ụkọ ego nke ndị na-ejide ndị na-akwọ ụgbọ ala azụmahịa na ikike ikikere ọrụ na asambodo nnabata. N'ọnọdụ a, ndị ọrụ ime obodo Mupolla na-arụ ọrụ na mpaghara ahụ dum site na mpempe akwụkwọ ikike azụmaahịa (S, T, TM, BB) etinyere na mpaghara ebe ha nwere ike itinye akwụkwọ na-enweghị enwe oge na mfu ego.
Nnata nke ngwa malitere na Fethiye
Muğla Obodo ukwu akpọpụtala Fethiye dị ka otu n'ime mpaghara ndị na-anya ụgbọ mmiri maka "Asambodo Ọrụ na Nchịkwa." N'ime ogo a, a malitere iwere akwụkwọ site n'aka onye azụmaahịa nke nwere efere ikikere azụmaahịa na mpaghara Fethiye. Ngwa Köprübaşı dị ebe a na-adọba ụgbọala Fethiye Artisanship ngwa ndị ọkwọ ụgbọ ala nabatara na-enweghị mkpa ịbịa n’etiti obodo nwere ike itinye akwụkwọ. Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị ndị ọrụ aka na Fethiye, mana na mpaghara dị nso ahịa nwere ike itinye aka na mpaghara ndị a.
Site na mmezu nke akụrụngwa teknụzụ na Bodrum na Marmaris, enwere ike ịnweta ngwa ndị a site na mpaghara ndị a.
Site na mmejuputa ihe akụrụngwa nke Muğla Obodo ukwu, Ọrụ Bodrum na Asambodo Ikike ”na mpaghara Bodrum na Marmaris ga-amalite ịnakwere ngwa ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ikike azụmaahịa azụmahịa. N'ọnọdụ a, azụmaahịa 1926 dị na mpaghara Bodrum, ndị ahịa 981 na Marmaris na-enweghị mkpa nke etiti obodo ga-enwe ike ijikwa azụmahịa na azụmahịa. Ndị na-ere ahịa Chauffeur na Marmaris district Armutalan ochie ime ụlọ na Muğla Metropolitan Municipality Marmaris Service Building 2. N'elu ụlọ, na mpaghara Bodrum Konacık - Bitez Junction Obodo ukwu Kọmitii Ibe Mbupu Ọ ga-enwe ike itinye akwụkwọ.
Ndi isi obodo ukwu: vatandaş Anyị ga-aga n’ihu n’ọrụ metụtara obodo anyị ka anyị ghara ịbụrụ ndị ahịa anyị ihe ”
E kwupụtara nkwupụta ndị a na nkwupụta nke Muğla Metropolitan Municipality; Çgbọala Araç n'etiti oke nke iwu na usoro niile nọ na mpaghara anyị ga-enwerịrị ọtụtụ ngwa na njikwa iji nweta Asambodo Uygunluk nke togbọ njem ”. Ọ bụ ya mere ndị na-ere ụgbọala anyị na-azụ ahịa ji bịa n'ụlọ ụlọ anyị ma dejupụta akwụkwọ iji mepụta akwụkwọ a. N'iburu n'uche ókèala mpaghara anyị, ndị ọkwọ ụgbọ ala anyị nọ na-enwe ọrụ na ọrụ oge. Anyị emeela ngwa nke na-eme ka ndị na-ere ahịa anyị nwee ike ịgbaso ikike na ụzọ ikike na ngwa na usoro usoro site na ndị ọrụ nke ndị isi oche nke ndị ọkwọ ụgbọala na ndị ọrụ ụgbọala. Ugwu ugwu, apịtị mmiri, ehihie na abalị na-enweghị mkpa ịlele kwekọ n'ụgbọ nke ndị ọrụ e kenyere na mpaghara, agbata na nkwụsị site na ịga na njikwa ndị dị mkpa na-aga. Anyị ga-aga n'ihu n'ọrụ ndị metụtara obodo anyị nke ga-eme ka ọrụ ndị ahịa anyị ghara ịdị mma ma chekwaa oge. ”
6 Wagon amalite na Başkentray
Halkalı-Gebze Station Station Ihe ịrịba ama ka ị jikọtara…
Onu ogugu nke ugbo ala Ankara Ime Obodo…
Ebe a na-eli ozu n’efu na mpaghara Diyarbakır…
Nsogbu Ụgbọ njem na Distrikti Samsun na-echere Ngwọta
V Plaka Minibus Ebere nke Ngalaba Erciş Emela
Sefaköy-Beylikdüzü Metro oru ngo maka ụlọ ọrụ…
Usoro Ịgba Mpempe Akwụkwọ Ngwá Agha Na-abịa na Gates
T-Plate abịarute na Bilecik
Oru na ikike Ikike
Munğla obodo ukwu
Usoro Usoro Ngwa Azụmaahịa dị na Muğla distrikti
Usoro Usoro Ngwa Azụmaahịa